China Enameled Nkedo ígwè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / nwa teapot kettle factory na ndị na-emepụta |Forrest
Ụdị ihe ọṅụṅụ:
Ibe mmiri & Kettles
enamel n'ime na eserese n'èzí
ihe nkedo ígwè kettle
Ntọala mmanya Pitchers
Akara ahaziri ahazi
Igbe agba aja aja
Nkedo ígwè green/oji teapot
Na-ehicha ígwè nkedo enamel gị
uKwe ka esi nri ka ọ dị jụụ tupu ịsa ahụ.
uJiri mmiri ncha na-ekpo ọkụ saa aka iji chekwaa ọdịdị mbụ nke cookware.
uKpochapụ ngwa nri ozugbo.
uJiri naanị plastik ma ọ bụ naịlọn na-akpachapụ anya iji zere imebi enamel.
uMaka ntụpọ na-adịgide adịgide, gbanye n'ime ngwa nri maka awa 2 ruo 3
uIji wepụ ihe ọ bụla esiri na nri fọdụrụnụ, sie ngwakọta nke mmiri 1 iko na soda tablespoons 2 n'ime ngwa nri.
uAdịla n'akụkụ ala mkpuchi na ite ahụ, nke ahụ pụtara na mkpuchi enamel enweghị ike imetụ ibe ya aka ozugbo, nke ahụ ga-eme ka ọkpụkpụ dị n'elu.
A: Ọtụtụ mgbe anyị MOQ bụ 500 PC.Mana anyị na-anabata ọnụọgụ dị ala maka usoro ikpe gị.Biko nweere onwe gị ịgwa anyị iberibe ole ị chọrọ, anyị ga-agbakọ ọnụ ahịa ya kwekọrọ, na-atụ anya na ị nwere ike itinye nnukwu iwu mgbe ịlele ogo ngwaahịa anyị ma mara ọrụ anyị.
A: O doro anya.Anyị na-enyekarị ihe nlele ọpụpụ n'efu.Mana obere ego nlele maka atụmatụ omenala.A na-akwụghachi ụgwọ nlele mgbe usoro ruru n'ụfọdụ.Anyị na-ezigakarị nlele site na FEDEX, UPS, TNT ma ọ bụ DHL.Ọ bụrụ na ị nwere ụgbọelu akaụntụ, ọ ga-adị mma ka ụgbọ mmiri na akaụntụ gị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ibu ụgwọ anyị papal, anyị ga-ụgbọ mmiri na akaụntụ anyị.Ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 2-4 iji ruo.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge nlele nlele?
A: N'ihi na ẹdude samples, ọ na-ewe 2-3 ụbọchị.Ha nweere onwe ha.Ọ bụrụ na ịchọrọ imewe nke gị, ọ na-ewe ụbọchị 5-7, dabere na gị na-echepụta ma ha chọrọ ihuenyo mbipụta ọhụrụ, wdg.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge mmepụta ihe dị?
A: Ọ na-ewe ụbọchị 30 maka MOQ.Anyị nwere nnukwu mmepụta ikike, nke nwere ike hụ na oge nnyefe ngwa ngwa ọbụna maka nnukwu ọnụ ọgụgụ.
Ajụjụ: Kedu ụdị faịlụ ị chọrọ ma ọ bụrụ na achọrọ m imewe nke m?
A: Anyị nwere onye nrụpụta nke anyị n'ụlọ.Ya mere, ị nwere ike ịnye JPG, AI, cdr ma ọ bụ PDF, wdg. Anyị ga-eme ka 3D ịbịaru maka ebu ma ọ bụ mbipụta akwụkwọ maka nkwenye ikpeazụ gị dabere na usoro.
Ajụjụ: Agba ole dị?
A: Anyị dabara na agba na Pantone Matching System.Yabụ ị nwere ike ịgwa anyị koodu agba Pantone ịchọrọ.Anyị ga-adaba na agba.Ma ọ bụ anyị ga-akwado gị ụfọdụ agba ama ama.
Q: Kedu ụdị asambodo ị ga-enwe?
A: Oge ịkwụ ụgwọ anyị nkịtị bụ TT 30% nkwụnye ego mgbe iwu bịanyere aka na ya na 70% megide nnomi B / L.Anyị na-anabatakwa LC na anya.
1) Mbukota nke Cast Iron Teapot:
-Site na onye ozi, dị kaDHL, UPS, FEDEX,wdg. Ọ bụ ọnụ ụzọ doo, na-emekarị3-4 ụbọchịịbịarute.
-Site n'ikukuna ọdụ ụgbọ elu, na-emekarị5-7 ụbọchịịbịarute.
-Site n'oké osimirin'ọdụ ụgbọ mmiri, uaually15-30 ụbọchịịbịarute.
Ọ bụrụ na oge nnyefe gị dị ngwa ngwa, anyị na-atụ aro ka ịhọrọ ozi ma ọ bụ site na ikuku.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-adụ gị ọdụ site n'oké osimiri, ọ dị ọnụ ala.
Ọrụ ịntanetị awa 1.24.
2. Best tupu ire & mgbe-ire ọrụ.
3. 50 ụbọchị mgbe ị nwetasịrị mbupu nkwụnye ego.
4. Anyị ga-ahọrọ ụlọ ọrụ mbupu na ọrụ dị mma na ọnụ ala dị ala maka gị.
Nke gara aga: Japanese enamel nkedo ígwè teapot 0.8L
Osote: 0.3L Eurofins akwadoro agba ahaziri agbaziri enamel tetsubin cast iron kettle teapot
Ihe nkedo a na-eji akwa akwa akwa Lod...
Handle nwere ike mpịaji okirikiri dayameta 24 na 27cm Pres...
Ọkụ teapot nwere ike ibugharị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
N'ogbe nkedo Iron Chinese Drinkware Kettle Se...
Enamel drinkware tea kettle nwere igwe anaghị agba nchara ...
Igwe a na-ekpo ọkụ nkedo nwere ogologo aka gburugburu gburugburu...